Mankalaza ny taom-baovao sinoa 2018 izao tontolo izao amin'ny fomba | Vaovao momba ny dia
Ny zoma lasa teo dia nankalaza ny taona vaovao ny vondrom-piarahamonina sinoa, indrindra ny 4716 araka ny kalandrie, ny fialantsasatra nentim-paharazana manan-danja indrindra ao amin'ny firenena aziatika. Amin'ny taona 2018, ny famantarana ny alika no endrika afovoany, izay itondrana toetra tsara toa ny tsy fivadihana, ny fiaraha-miory, ny herimpo ary ny faharanitan-tsaina.
Na dia samy manana taona hafa aza ny famantarana tsirairay, amin'ny taona 2018 dia hitan'ny Shinoa mialoha ny taona iray fananana manokana sy matihanina indrindra ho an'ireo olona manana fahaiza-manao lehibe kokoa hifanaraka amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainana.
Ny fankalazana ny Taom-baovao Sinoa dia haharitra hatramin'ny 2 martsa, totalin'ny 15 andro izay, amin'ny alàlan'ny fombafombam-pivavahana, ny fianakaviana sinoa dia manao tetezamita manomboka amin'ny taona an'ny akoho mpamono afo ka hatramin'ny taonan'ny alika eto an-tany mba hisarihana fifaliana sy fifaliana. mirary anao ho tsara vintana.
Any Espana, lehibe ny vondrom-piarahamonina sinoa ary ny tanàna toa an'i Barcelona, ​​Madrid na Valencia dia miomana ihany koa hankalaza sy handray ny Taonan'ny alika.
1 Faly 4716!
2 Ahoana ny fomba hankalazana ny Taombaovao any Shina?
3 Ary eo amin'izao tontolo izao?
4 Ankalazaina any Espana ve ny Taombaovao sinoa?
Ny tetiandro sinoa dia mifototra amin'ny fanisana taloha momba ny fotoana mifototra amin'ny fandinihana ireo dingana amin'ny volana hamaritana ny tsimbadin'ny fambolena, ny motera ny toekarena tamin'ny andro taloha.
Araka io kalandrie io, ny fisehoan'ny tsinam-bolana voalohany dia ilay mifanindry amin'ny fiovan'ny taona sy ny fety, zavatra izay matetika mitranga eo anelanelan'ny 21 Janoary sy 20 Febroary.
Ahoana ny fomba hankalazana ny Taombaovao any Shina?
Any Shina dia fetim-pirenena izay fialantsasatra maharitra herinandro ny ankamaroan'ny mpiasa. Manamarika ny Taom-baovao ny fihaonan'ireo mpianakavy, ka nahatonga ny fivezivezena an-tapitrisany tao amin'ny firenena.
Tany am-piandohan'ny festival dia namoha ny varavarankely sy ny varavaran'ny tranony ny fianakaviana sinoa ka nivoaka ny zava-dratsy rehetra nentin'ny taona lasa. Mandritra izany fotoana izany, eny an-kalamanjana dia feno lanterne mena ny arabe ary misy ny matso dragona sy liona handroahana fanahy ratsy. Ankoatr'izay, amin'ny vanim-potoanan'ny alika, ny karazan-javatra rehetra mifandraika amin'ny tarehiny dia amidy am-pivarotana.
Ny hetsika nentim-paharazana dia nifarana tamin'ny fetin'ny jiro izay natsipy tany an-danitra mba hanazava azy ireo rehefa miakatra izy ireo ary miaraka amin'ny fampisehoana afomanga. Saingy, any Beijing amin'ity taona ity dia tsy hisy ny afomanga na afomanga satria nisy lalàna nivoaka izay mandrara azy ireo ao anatin'ny làlambe fahadimy noho ny fandotoana be.
Ny fahalianana hafa amin'ity fankalazana ity dia tsy misy miresaka momba ny lasa matetika, satria heverina fa manintona vintan-dratsy izany ary tsy voasazy ny ankizy, ary manana fahalalahana hanao ratsy izy ireo.
Sary | London amin'ny Espaniola
Ary eo amin'izao tontolo izao?
Ny fahatongavan'ny Taom-baovao sinoa 2018 dia nankalazaina tamin'ny faritra maro amin'ny planeta. Any Etazonia, dia nisy fampirantiana afomanga nanaitra tao New York City, na dia nankalazaina tany Seattle, San Francisco na Washington aza ny fiandohan'ny taona vaovao.
London dia nilaza fa izy no tanàna mankalaza ny taom-baovao sinoa ivelan'ny kaontinanta aziatika. Any no anaovana ireo fihetsika ireo any amin'ny West End mandalo an'i Chinatown mankany amin'ny Trafalgar Square, izay misy ireo hetsika manandanja indrindra. Hetsika maimaimpoana karakarain'ny London Chinatown Chinese Association ary mahasarika mpitsidika an-jatony isan-taona.
Ny firenena hafa mankalaza ny Taombaovao sinoa dia ny Filipina, Taiwan, Singapore, Canada na Australia, sns.
Ankalazaina any Espana ve ny Taombaovao sinoa?
Espaniôla koa dia mandray anjara amin'ireo hetsika amin'ny fankalazana ny Taona Sinoa 2018. Ohatra, Madrid dia nikarakara hetsika isan-karazany hatramin'ny 28 febroary mba hahafahan'ny mpitsidika sy ny mponina mianatra bebe kokoa momba sy mankafy ny kolontsaina sinoa. Ny kaonseritra, foibe, dihy ary zotra gastronomika dia sasany amin'ireo hetsika kasaina hatao.
Ankalazaina ao Barcelona ihany koa ny Taombaovao sinoa miaraka amin'ny matso, fampisehoana mozika ary foara ara-kolotsaina sy kolontsaina ao amin'ny Paseo de Lluís Companys. Tanàna hafa toa an'i Granada, Palma na Valencia ihany koa dia handamina hetsika mifandraika amin'ny Year of the Earth Dog.
Ka na aiza na aiza misy anao dia azonao antoka fa hahita toerana handraisana anjara amin'ny fankalazana ny Taom-baovao ary hifalifaly!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » About us » Mankalaza ny taom-baovao sinoa 2018 izao tontolo izao amin'ny fomba
Torohevitra 8 hahitana ny hotely lavorary